I-China Photoluminescent Glaze Tile fektri kanye nabakhiqizi | I-Grand Luminous
I-Photoluminescent Glaze Tile Izici Zokusebenza Kokusebenza Kwama-Photo Luminescent Ceramics / Tiles kanye ne-Glass 1） Izithombe ze-luminescent ceramics / Tiles kanye nengilazi yezithombe ze-luminescent kukhiqizwa ngokungeza isithombe se-luminescent pigment ekukhiqizweni kobumba be-ceramics obujwayelekile nengilazi. Uma kuqhathaniswa nobumba kanye nengilazi ejwayelekile, imikhiqizo ingakhanya ebumnyameni ngemuva kokungenisa amalambu abonakalayo, okwenza ama-ceramics nengilazi asetshenziswe kabanzi. 2) Okuqukethwe kwesithombe se-luminescent ceramics kanye ne-gla ...
Izici nokusebenza kwe-Photo Luminescent Ceramics / tile kanye ne-Glass
I-1） Izithombe ze-luminescent ceramics / tile kanye nengilazi yesithombe se-luminescent zikhiqizwa ngokungeza isithombe se-luminescent pigment inqubo yokukhiqiza ye-ceramics esejwayelekile nengilazi. Uma kuqhathaniswa nobumba kanye nengilazi ejwayelekile, imikhiqizo ingakhanya ebumnyameni ngemuva kokungenisa amalambu abonakalayo, okwenza ama-ceramics nengilazi asetshenziswe kabanzi.
2) Okuqukethwe kwesithombe se-luminescent ceramics kanye nengilazi kungathola izibani ezahlukahlukene ezibonakalayo kuze kufinyelele lapho kugcwele khona, bese kukhanya ebumnyameni njalo, ukusetshenziswa okungenamkhawulo kokusebenzisa isikhathi eside ngemuva kokukhanya, izibani eziphakeme, eziphindwe kayishumi ngokukhanyayo kwendabuko impahla. Izinto ezibonakalayo azinawo umsakazo, zingenangozi futhi azinabungozi.
I-3) Izibani eziphuthumayo eziphansi eziphansi zingahola abantu ukuba baphume ngokuhlelekile ngaphansi kwesimo esiphuthumayo futhi banciphise ukudideka ngaphandle kokonga amandla.
I-4) Ukusetshenziswa kwezithombe zobumba zesithombe se-luminescent kanye nengilazi ezindlini ezifuywayo kanye nasezakhiweni zomphakathi ngeke kuhlobise futhi kube ubuhle kuphela izindlu nendawo yokusebenza, kodwa futhi kungaletha indawo elula kubahlali ngokukhanya kwayo ebumnyameni.
I-5) Izithombe ze-luminescent ceramics nengilazi zingakhipha i-wave ethile yokukhanya yobude, enganqanda izinhlobo ezithile zezifo kanye nezifo. Lesi sici sihlangabezana nombono ophilayo wemfashini futhi onempilo kubantu besimanje ngokusetshenziswa kwemikhiqizo ekhishini nasendlini yokugezela.
I-6) Izithombe ze-luminescent ceramics nengilazi zingumbonakaliso owonakalisayo, ukumelana nokuqothuka, ukubuyiselwa umlilo, ukumelana nokuguga futhi mahhala kuma-radioacaction uma kuqhathaniswa nezinye izinto ze-luminescent ze-organic, ezizenza zisetshenziswe kabanzi ezindlini ezifuywayo nasezakhiweni zomphakathi.
Esedlule: Khazimula Emgqonyeni Omnyama (i-Fibre) / Khazimula Emgodini Wokuthunga Okumnyama
Olandelayo: ILinkous Printa Ink